Android 11 agaghị egosiputa onyonyo album anyị na - egwu na mkpọchi ihuenyo | Gam akporosis
Sistemụ arụmọrụ ọ bụla nwere ụdị nhọrọ dị iche iche, yana Android bụ nke ahụ merie site na okpuru ala. Dị ka onye ọrụ gam akporo na iPhone, otu n'ime akụkụ nhazi nke kachasị adọta uche m na gam akporo bụ imepụta mkpọchi mkpọchi mgbe m na-ege egwu.
Na gam akporo 10, mgbe m na-akpọ egwu echekwara na ngwaọrụ m ma ọ bụ na Spotify, mkpọchi mkpọchi gosipụtara agba nke ihu na ụzọ adịghị ọcha na mkpọchi mkpọchi, mmetụta mara mma nke ukwuu na ldị mwute ikwu na ọ ga-apụ n'anya na mbata nke gam akporo 11, dị ka ụlọ ọrụ ahụ kwadoro n'onwe ya.
Android 11 ga-echefu kpamkpam banyere imepụta mkpọchi mkpọchi, dị ka a Onye nlegharị anya site na Nsogbu Tracker, ngwá ọrụ Google jiri soro chinchi na njirimara atụmatụ n'oge mmepe ngwaahịa.
Ọtụtụ bụ ndị ọrụ ndị kọọrọ enweghị arụ ọrụ a site na Esemokwu Tracker. Ọnụ ọgụgụ nke ndị ọrụ dị elu na ha kwesiri ikwenye na akuko. Otú ọ dị, ọ gaghị abụ oge mbụ a Onye nlegharị anya, na-ekwuwa maka njedebe nke atụmatụ ma ọ bụ arụmọrụ na n'ikpeazụ ma ọ dị.
Ndị ọrụ ndị ọzọ, enwebeghị obi anụrị na onye na-ajụ ase ọ na-egwu gbanwee mkpọchi ihuenyo ndabere. N'ezie, ole na ole bụ ngwa ndị nyere ohere ịkwụsị ọrụ a, Google Play Music bụ otu n'ime ha.
Enwere ike ịchọta ihe kpatara njirimara nke njirimara a na redesigned ngosi njikwa, ọzọ nke dị mkpa ọhụrụ ga-abịa site n'aka gam akporo 11 na mmalite nke Septemba na nsụgharị ikpeazụ ya, ọ dịkarịa ala maka njedebe niile nke Google Pixel nso.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Android 11 agaghị egosiputa onyonyo album anyị na-egwu na mkpọchi mkpọchi
Etu esi akpado ndị mmadụ na foto Twitter
Black Shark 3S bụ ọrụ: Smartphone ọhụụ na Snapdragon 865 na 12 GB nke RAM